Lua lingerie bra top black - Bayu The Label
musha / Products / Lua Bra Black
Lua Bra Black
Bayu inoshuma inokuudza iwe kuu bhora mumasvi
kuu inonyanya kuitwa nemaoko kuti ikupe manzwiro akasununguka uye akakodzera zvakakwana.
Underwired scalloped lace / mesh kapu.
Matambo ose anochinja.
Ndarama yakazara pamabhande uye B iri mberi.
Chinodira maoko kushambidza chete.
Muenzaniso ndeye 178 murefu / 87 mushamba (mukombe wakakwana B) / 63 chiuno / 97 muchiuno uye
inosunga ukuru S inosanganiswa ne BAWA pasi.
Tora zvakanaka kwandiri uye iwe uchandida sezvandinoita ..